News - အရည်အတွက်စွမ်းအင်မြင့်မားသော Ultrasonic ရောစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနည်းပညာအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း
အဆိုပါအရည်ပြောင်းလဲနေသော ultrasonic ရောနှောခြင်းနှင့်လူစုခွဲနည်းပညာအကြောင်းကိုတစ် ဦး ကအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်စကား
အရည်ပြောင်းလဲနေသော ultrasonic ရောစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနည်းပညာသည်အထူးသဖြင့်အရည်ပြောင်းလဲသော ultrasonic ဂျက် homogenizer နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏အဓိကနည်းပညာသည်အရည်ရွေ့လျားသော ultrasonic ဂျက် homogenizer ဖြစ်သည်。
အစဉ်အလာအရရောနှောခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနည်းပညာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လှော်နည်းပညာကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရောနှောခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းနည်းပညာသည်အရည်ပြောင်းလဲသော ultrasonic နည်းပညာဖြစ်သည်။
ultrasound ထုတ်လုပ်မှုနိယာမအရ ultrasound ကို electric ultrasound နှင့် hydrodynamic ultrasound ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်-ultrasonic ဂျက် homogenizer အရည်အမှုန်အပေါ်ကောင်းသောတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပေမယ့်, ကပြင်ပလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, စျေးကြီးမြင့်မားတဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျယ်ပြန့်လျှောက်ထားရန်မသင့်တော်; hydrodynamic ultrasonic ဂျက် homogenizer အရည် (များသောအားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အရည်) ၏အသုံးပြုမှုကိုတုန်ခါဖို့ဂျက်လေယာဉ်တစ်မျိုး homogenizer အတွက်ကျူပင်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကအင်အားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အရည်အလတ်စားဂျက်လေယာဉ်၏အခ်ါကြိမ်နှုန်းသည်ကျူပင်၏သဘာဝကြိမ်နှုန်းနှင့်ကိုက်ညီပါကပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ultrasonic လှိုင်းများကိုထုတ်လွှတ်သည်။ မြင့်မားသောအသံပြင်းထန်မှု Ultrasound ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအရည်နှင့်အလယ်အလတ်အရည်တို့၏ရောနှောခြင်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်၊ အရည်၏အက်တမ်အမှုန်အရွယ်အစားကိုလျော့နည်းစေသည်၊ ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထိုးဖောက်ရန်အရည်များရောနှောခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၏ညီညွတ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလေထုထိတ်လန့်မှုလှိုင်းများသည် cavitation လယ်ပြင်တွင်ပေါ်လာပြီးအရည်အရောအနှောကိုအဆက်မပြတ်ထိခိုက်သည်၊ အလယ်အလတ်အရည်ကိုမိုက်ခရိုသို့မဟုတ်နာနိုမီတာအရွယ်အမှုန်များအဖြစ်သို့တွန်းပို့သည်။ နှင့်အဓိကအရည်ထဲမှာသူတို့ကိုအညီအမျှလူစုခွဲ, စွန့်ပစ်အဆင့်ဖွဲ့စည်းရန်။
လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာတင်ခြင်းသည်အရည်အား ပြောင်းလဲ၍ အလွန်လျင်မြန်သော ultrasonic ရောစပ်ခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
1. Hydrodynamic ultrasonic ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောရေပြင်ဆင်မှုကိရိယာ
2. Hydrodynamic ultrasonic graphene အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားပြင်ဆင်မှုကိရိယာ
3. အရည်ပါဝါ Ultrasonic အရက်သေစာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစနစ်
4. Hydrodynamic ultrasonic သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးရေပြင်ဆင်မှုစနစ်